Taratasin’i Jean Samy hahatratra ny ho avy
Samy mihazakaza mirohotra, manatitra taratasy Filatsahana ho fidiana izay ho filohan'ny Malagasy. Tsy lahy , tsy vavy, tsy antitra tsy tanora. Mba samy manam-paniriana ny ho lany moramora.
Miarahaba Jean a, izaho efa tena saika tsy hanoratra aty aminao intsony , fa nahita kosa ny adalan’ireo mpiara-miasa aminao dia tsy mandry ny eritreritra.Oh ry Jean a, fa dia ten any fahefana ve no mahalasa adala sa adala daholo ireo olona nomenao fahefana ireo e…
Aza be resaka e
Teo foana ianao hatrizay , naninona no tsy niteny? Fa izao vao mihorakoraka etsy sy eroa hoe tsy mety ireny. Raha hoe nametra-pialàna indray mety azoko leferina Fa olona voadaka, very seza vao mimpenompenona.
Faly miarahaba anao aho ry Jean amin’izao fahatraranao ny nahaterahan’ny Mpamonjy izao !
Izahay moa izao velom-panontaniana hoe : mahatsiaro tena ho tena mila ny mpamonjy ve ianareo amin’izao fotoana ? Aleo aloha dia ampahatsiahivina ihany fa tena ilain’izao tontolo izao izany ry Jean fa tsy hoe misy Rakotomamonjy akory ao aminareo dia tsy hila an’izany a a ! Hivadika Rakotovonjena na Rakoto Milavonjy tampoka eo izay vao ho gaga. Tandremo bainina fa mitady hizotra mankany mihitsy anie izao lalanareo izao a ! Misy fetrany ny zavatra rehetra. Izahay anie efa zatra miafy arak’ilay tononkira fa ianareo izao no tsy hay e ! Ianareo mantsy toa efa nanana ny ampy foana dia mbola vao mainka nanao izay hananana ny mihoatra indray ity koa ! Raha mba herimponareo madiodio moa no nahatonga anareo teo maninona fa ilay paosinay sy vata fitehirizan-karenay haroninay mihitsy ho aho no hisy farany. Tena marina e ! Hitombo ny taona dia vao mainka ve hiitatra io fomba ratsy fanaonareo io ? Samy ho hahatratra ny ho avy ary e !